54 ဘာသာစကားသို့အခမဲ့ Cross-ဘာသာစကားဘာသာပြန်ချက် | Trandict.xyz Trandict.xyz
Trandict.xyz မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည် Trandict.xyz မျိုးစုံကိုပေးသူထံမှ Cross-ဘာသာစကားဘာသာပြန်ချက်များကိုနှိုင်းယှဉ်ဖို့အင်တာနက်-based ကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ တစျမကျြနှာပျေါတှငျသငျသညျအလွယ်တကူအကောင်းဆုံးကိုက်ညီတဲ့ဘာသာပြန်ချက်ကိုရှာဖွေမျိုးစုံသတင်းရပ်ကွက်များနှိုင်းယှဉ်နိုင်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘာသာပြန်ဆိုသူရောက်နေတယ်ဆိုရင်, သင်ဘာသာပြန်များကျွန်တော်တို့ရဲ့ directory ထဲတွင်သင်၏နာမကိုထည့်ပါ။ သင် form မှာဖြည့်လျှင်, သင်၏ပရိုဖိုင်ကိုသက်ဝင်ပြီးနောက်, သင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုဘာသာပြန်ချက်များကိုရှာဖွေနေသည်လူများတို့အားအခမဲ့ကမ်းလှမ်းခဲ့လိမ့်မည်။ ယခုစတင်ပါ။ အပေါ်က link ကိုသုံးပြီး Register ။ 54 ဘာသာစကားသို့အခမဲ့ Cross-ဘာသာစကားဘာသာပြန်ချက်
Translate ကနေ: ဘာသာစကားကိုရွေးချယ်ပါကျေးဇူးပြုပြီး
သို့ : ကျွွောငာခကျြ
သုံးပြီး Translate : Google translate Bing translate Yandex source စာသားကို
ရရှိနိုင်သောဘာသာစကားများအတွက်ကနာဒါ ကာဂျစ် ကာဇတ် ကာ့ဒ် (ကာမန်ဂျီ) ကော်ဆီကန် ကိုရီးယား ကက်တလန် ခမာ ခရိုအေးရှား ချီချယ်ဝါ ချက် ဂရိ ဂူဂျရာတီ ဂယ်လိရှ ဂျပန် ဂျာ​ဗား​ ဂျာမန် ဂျော်ဂျီယား စကော့ ဂေးလစ် စပိန်အားလုံးပြရန် >>ကနာဒါ ကာဂျစ် ကာဇတ် ကာ့ဒ် (ကာမန်ဂျီ) ကော်ဆီကန် ကိုရီးယား ကက်တလန် ခမာ ခရိုအေးရှား ချီချယ်ဝါ ချက် ဂရိ ဂူဂျရာတီ ဂယ်လိရှ ဂျပန် ဂျာ​ဗား​ ဂျာမန် ဂျော်ဂျီယား စကော့ ဂေးလစ် စပိန် ဆလိုဗေးနီးယား ဆလိုဗက် ဆာမိုအန် ဆားဘီးယား ဆူဒန် ဆိုမာလီ ဆက်ဆိုတို ဆင်ဒီ ဆင်ဟာလာ ဆွာဟီလီ ဆွီဒင် ဇူးလူး တ​မီးလ်​ တရုတ် (အလွယ်) တာဂျစ် တူ​ရ​ကီ တယ်လူဂူ ထိုင်း ဒတ်ချ် ဒိန်းမတ် နီပေါ နော်ဝေ ပါရှန် ပေါ်တူဂီ ပိုလန် ပတ်ရှ်တို ပန်​ဂျာ​ဘီ​ ပြင်သစ် ဖရစ်ရှန် ဖိ​လစ်​ပိုင်​ ဖင်လန် ဗီယက်နမ် ဘာ့စ် ဘူဂေးရီးယား ဘော့စနီးယား ဘင်္ဂါလီ ဘယ်လာရုစ် မလေယာလမ် မလေး မာရာသီ မာလာဂါစီ မော်ရီ မော်လတာ မက်ဆီဒိုးနီးယား မြန်မာ (မြန်မာ) မွန်ဂိုလီးယား ယီဒစ်ရှ် ယူ​က​ရိန်း​ ယောရူးဘာ ရုရှား ရိုမေးနီးယား ရှိုနာ လာအို လူဇင်ဘတ် လက်တင် လစ်သူယေးနီးယား လတ်ဗီယာ ဝေလ ဟီဘရူး ဟေတီ ခရီအိုး ဟိုးဆာ ဟင်ဒီ ဟောင်စာ ဟန်ဂေရီ အဇာဘိုင်ဂျန် အာမေးနီးယား အာရေဗျ အီတလီ ဥဇဘက် အူရဒူ အက်စတိုးနီးယား အက်စ်ပဲရန်တို အိုက်စလန် အင်္ဂလိပ် အင်ဒိုနီးရှား အိုင်းရစ်ရှ် အစ်ဘို အမ်ဟဲရစ်ခ် အယ်ဖရိကန်းစ် အယ်လ်ဘေးနီးယားပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘာသာပြန်ချက်န်ဆောင်မှု
Name ကိုTranslate ကနေသို့PRအင်္ဂလိပ်ချက်I can translate from English to Czech at amateur level. Martin Chudobaချက်ရုရှားПереводы с русского языка на чешский и наоборот.Пассо Авантиရုရှားအာရေဗျ, ဘယ်လာရုစ်, ဘူဂေးရီးယား, ချက်, ဒိန်းမတ်, ဂျာမန်, ဂရိ, အင်္ဂလိပ်, စပိန်, အက်စတိုးနီးယား, ဖင်လန်, ပြင်သစ်, ခရိုအေးရှား, အီတလီ, ဟီဘရူး, ဂျပန်, ကိုရီးယား, လစ်သူယေးနီးယား, လတ်ဗီယာ, မက်ဆီဒိုးနီးယား, ဒတ်ချ်, နော်ဝေ, ပိုလန်, ပေါ်တူဂီ, ရိုမေးနီးယား, ဆလိုဗက်, ဆလိုဗေးနီးယား, အယ်လ်ဘေးနီးယား, ဆားဘီးယား, ဆွီဒင်, ထိုင်း, တူ​ရ​ကီ, ယူ​က​ရိန်း​, ဗီယက်နမ်, တရုတ် (အလွယ်)အာရေဗျ, ဘယ်လာရုစ်, ဘူဂေးရီးယား, ချက်, ဒိန်းမတ်, ဂျာမန်, ဂရိ, အင်္ဂလိပ်, စပိန်.. more >Переводим тексты с/на 50 иностранных языков и с большим интересом беремся за необычные проекты.Harcz & Partner Ltd.ဟန်ဂေရီအာရေဗျ, ဘူဂေးရီးယား, ဂျာမန်, ဂရိ, အင်္ဂလိပ်, စပိန်, ပြင်သစ်, ဟင်ဒီ, အင်ဒိုနီးရှား, အိုက်စလန်, အီတလီ, မလေး, မော်လတာ, ဒတ်ချ်, ပိုလန်, ပေါ်တူဂီ, ရိုမေးနီးယား, ရုရှား, ဆလိုဗက်, ဆလိုဗေးနီးယား, ဆားဘီးယား, ဆွာဟီလီ, ထိုင်း, တူ​ရ​ကီ, ယူ​က​ရိန်း​, ဗီယက်နမ်, တရုတ် (အလွယ်)အာရေဗျ, ဘူဂေးရီးယား, ဂျာမန်, ဂရိ, အင်္ဂလိပ်, စပိန်, ပြင်သစ်, ဟင်ဒီ, အင်ဒိုနီးရှား.. more >Harcz & Partner Ltd. is Translation, Editing & Localisation Company.Lingoline Ltd.အင်္ဂလိပ်အာရေဗျ, ဘယ်လာရုစ်, ဘူဂေးရီးယား, ချက်, ဒိန်းမတ်, ဂျာမန်, ဂရိ, စပိန်, အက်စတိုးနီးယား, ဖင်လန်, ပြင်သစ်, ဟင်ဒီ, ခရိုအေးရှား, ဟန်ဂေရီ, အင်ဒိုနီးရှား, အိုက်စလန်, အီတလီ, ဟီဘရူး, ဂျပန်, ကိုရီးယား, လစ်သူယေးနီးယား, လတ်ဗီယာ, မက်ဆီဒိုးနီးယား, မလေး, မော်လတာ, ဒတ်ချ်, နော်ဝေ, ပိုလန်, ပေါ်တူဂီ, ရိုမေးနီးယား, ရုရှား, ဆလိုဗက်, ဆလိုဗေးနီးယား, အယ်လ်ဘေးနီးယား, ဆားဘီးယား, ဆွီဒင်, ထိုင်း, တူ​ရ​ကီ, ယူ​က​ရိန်း​, ဗီယက်နမ်, တရုတ် (အလွယ်)အာရေဗျ, ဘယ်လာရုစ်, ဘူဂေးရီးယား, ချက်, ဒိန်းမတ်, ဂျာမန်, ဂရိ, စပိန်, အက်စတိုးနီးယား.. more >We coverawide range of sectors, such as finances, marketing, law, medicine, automotive and sciences.Альфа и Омегаရုရှားအာရေဗျ, ဂျာမန်, အင်္ဂလိပ်, စပိန်, ပြင်သစ်, အီတလီ, တရုတ် (အလွယ်), Профессиональный перевод документов, и другие лингвистические услуги.Lingo24 Ltd.စပိန်အာရေဗျ, ချက်, ဒိန်းမတ်, ဂျာမန်, အင်္ဂလိပ်, စပိန်, ဖင်လန်, ပြင်သစ်, ဟန်ဂေရီ, အိုက်စလန်, အီတလီ, ဂျပန်, ကိုရီးယား, ဒတ်ချ်, နော်ဝေ, ပိုလန်, ပေါ်တူဂီ, ရုရှား, ဆွီဒင်, ဖိ​လစ်​ပိုင်​, တူ​ရ​ကီ, တရုတ် (အလွယ်), အာရေဗျ, ချက်, ဒိန်းမတ်, ဂျာမန်, အင်္ဂလိပ်, စပိန်, ဖင်လန်, ပြင်သစ်, ဟန်ဂေရီ.. more >We offer professional language translation services with expert translators.DutchTransဒတ်ချ်အယ်ဖရိကန်းစ်, အာရေဗျ, ဘူဂေးရီးယား, ချက်, ဒိန်းမတ်, ဂျာမန်, ဂရိ, အင်္ဂလိပ်, စပိန်, အက်စတိုးနီးယား, ဖင်လန်, ပြင်သစ်, ဟင်ဒီ, ခရိုအေးရှား, ဟန်ဂေရီ, အင်ဒိုနီးရှား, အီတလီ, ဟီဘရူး, ဂျပန်, ကိုရီးယား, လစ်သူယေးနီးယား, လတ်ဗီယာ, မက်ဆီဒိုးနီးယား, မလေး, နော်ဝေ, ပိုလန်, ပေါ်တူဂီ, ရိုမေးနီးယား, ရုရှား, ဆလိုဗက်, အယ်လ်ဘေးနီးယား, ဆားဘီးယား, ဆွီဒင်, ဆွာဟီလီ, ထိုင်း, တူ​ရ​ကီ, ယူ​က​ရိန်း​, ဗီယက်နမ်, တရုတ် (အလွယ်)အယ်ဖရိကန်းစ်, အာရေဗျ, ဘူဂေးရီးယား, ချက်, ဒိန်းမတ်, ဂျာမန်, ဂရိ, အင်္ဂလိပ်, စပိန်.. more >Professional translation agency focusing specifically on document translation.UnionTrad Companyပြင်သစ်အာရေဗျ, ဘူဂေးရီးယား, ကက်တလန်, ချက်, ဒိန်းမတ်, ဂျာမန်, ဂရိ, အင်္ဂလိပ်, စပိန်, အက်စတိုးနီးယား, ပါရှန်, ဖင်လန်, ပြင်သစ်, အိုင်းရစ်ရှ်, ဟင်ဒီ, ခရိုအေးရှား, ဟန်ဂေရီ, အင်ဒိုနီးရှား, အိုက်စလန်, အီတလီ, ဟီဘရူး, ဂျပန်, ကိုရီးယား, လစ်သူယေးနီးယား, လတ်ဗီယာ, မလေး, မော်လတာ, ဒတ်ချ်, နော်ဝေ, ပိုလန်, ပေါ်တူဂီ, ရိုမေးနီးယား, ရုရှား, ဆလိုဗက်, ဆလိုဗေးနီးယား, ဆားဘီးယား, ဆွီဒင်, ထိုင်း, ယူ​က​ရိန်း​, ဗီယက်နမ်, အာရေဗျ, ဘူဂေးရီးယား, ကက်တလန်, ချက်, ဒိန်းမတ်, ဂျာမန်, ဂရိ, အင်္ဂလိပ်, စပိန်.. more >Uniontrad Company est une agence de traduction implantée au coeur de Paris depuis plus de quinze ans.Lexcodeဖိ​လစ်​ပိုင်​အာရေဗျ, ကက်တလန်, ဒိန်းမတ်, ဂျာမန်, အင်္ဂလိပ်, စပိန်, ပြင်သစ်, ဟင်ဒီ, အီတလီ, ဟီဘရူး, ဂျပန်, ကိုရီးယား, ပေါ်တူဂီ, ရုရှား, ထိုင်း, ဗီယက်နမ်, တရုတ် (အလွယ်)အာရေဗျ, ကက်တလန်, ဒိန်းမတ်, ဂျာမန်, အင်္ဂလိပ်, စပိန်, ပြင်သစ်, ဟင်ဒီ, အီတလီ.. more >Lexcode Languages and Communication. Translation Agency, Philippines.ကျွန်တော်တို့ဟာပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘာသာပြန်များကိုအခမဲ့မြှင့်တင်ရေးကိုဆက်ကပ်။ ယခု Register နှင့်သင်၏ website ကိုအခမဲ့အသွားအလာကိုလက်ခံရရှိစတင်။	English to Vietnamese translatorTranslate to latinကက်တလန်, ကနာဒါ, ကာဂျစ်, ကာဇတ်, ကာ့ဒ် (ကာမန်ဂျီ), ကိုရီးယား, ကော်ဆီကန်, ခမာ, ခရိုအေးရှား, ချက်, ချီချယ်ဝါ, ဂယ်လိရှ, ဂရိ, ဂူဂျရာတီ, ဂျပန်, ဂျာမန်, ဂျာ​ဗား​, ဂျော်ဂျီယား, စကော့ ဂေးလစ်, စပိန်, ဆက်ဆိုတို, ဆင်ဒီ, ဆင်ဟာလာ, ဆလိုဗက်, ဆလိုဗေးနီးယား, ဆာမိုအန်, ဆားဘီးယား, ဆိုမာလီ, ဆူဒန်, ဆွာဟီလီ, ဆွီဒင်, ဇူးလူး, တယ်လူဂူ, တရုတ် (အလွယ်), တာဂျစ်, တူ​ရ​ကီ, တ​မီးလ်​, ထိုင်း, ဒတ်ချ်, ဒိန်းမတ်, နီပေါ, နော်ဝေ, ပတ်ရှ်တို, ပန်​ဂျာ​ဘီ​, ပါရှန်, ပိုလန်, ပေါ်တူဂီ, ပြင်သစ်, ဖင်လန်, ဖရစ်ရှန်, ဖိ​လစ်​ပိုင်​, ဗီယက်နမ်, ဘင်္ဂါလီ, ဘယ်လာရုစ်, ဘာ့စ်, ဘူဂေးရီးယား, ဘော့စနီးယား, မက်ဆီဒိုးနီးယား, မလေယာလမ်, မလေး, မာရာသီ, မာလာဂါစီ, မော်ရီ, မော်လတာ, မြန်မာ (မြန်မာ), မွန်ဂိုလီးယား, ယီဒစ်ရှ်, ယူ​က​ရိန်း​, ယောရူးဘာ, ရိုမေးနီးယား, ရုရှား, ရှိုနာ, လက်တင်, လစ်သူယေးနီးယား, လတ်ဗီယာ, လာအို, လူဇင်ဘတ်, ဝေလ, ဟင်ဒီ, ဟန်ဂေရီ, ဟိုးဆာ, ဟီဘရူး, ဟေတီ ခရီအိုး, ဟောင်စာ, အက်စတိုးနီးယား, အက်စ်ပဲရန်တို, အင်ဒိုနီးရှား, အင်္ဂလိပ်, အစ်ဘို, အဇာဘိုင်ဂျန်, အမ်ဟဲရစ်ခ်, အယ်ဖရိကန်းစ်, အယ်လ်ဘေးနီးယား, အာမေးနီးယား, အာရေဗျ, အိုက်စလန်, အိုင်းရစ်ရှ်, အီတလီ, အူရဒူ, ဥဇဘက်
Trandict.xyz သင်သည်ထူးခြားသောဘာသာပြန်ချက် utility ကိုဆောင်တတ်၏။ သငျသညျအစဉျအလိုအလျှောက်ဘာသာပြန်ချက်ရာတွင်အသုံးပြုလိုလျှင်, Trandict.xyz ကြိုးစားကြည့်ပါ - သင်တစ်နေရာတည်းကနေအများအပြားဘာသာပြန်ချက်အင်ဂျင်ကနေဘာသာပြန်ချက်များကိုနှိုင်းယှဉ်နိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာက်ဘ်ဆိုက်။